Kedu otu esi achọta otu n'ime ndị na-ere ahịa na Amazon?
O doro anya na mkparịta ụka banyere ụzọ isi ghọọ otu n'ime ndị na-ere ahịa ahịa kachasị elu na Amazon ga-enwe uche na-enweghị akụkụ kachasị mkpa nke ihe ịga nke ọma ecommerce mara dị ka akpaaka. N'okpuru ebe m ga-agba ọsọ ngwa ngwa site na ụzọ atọ dị ike nke akpaaka na Amazon - ya na ngwaahịa ịchọta isiokwu na ngwaahịa dị mkpa iji hụ onwe gị edepụtara n'etiti ndị na-ere ahịa na Amazon.
Ajụjụ banyere isiokwu ndị ziri ezi na otu esi achọta ha bụ ihe a na-ajụkarị maka ndị na-ere akwụkwọ na Amazon, karịsịa ndị nwere na nso nso a si n'aka SEO mbụ maka nchọta Google. Na ịchọrọ na ọ nweghị ndabara nyocha ihe nchọgharị na Amazon, azịza dị mkpirikpi bụ na ị nwere ike iji aka gị mee ya: site na nkeji
Jiri Google Planner iji chọpụta isiokwu dị mkpirikpi.
Tinye mkpụrụ okwu ahụ n'ime ihe nchọpụta ngwaahịa na Amazon - samsung company lebanon.
Lee nyocha ọchụchọ iji zoo nnukwu foto nke ọnọdụ gị.
Dịka ị nwere ike ịkọwarịrị, ime ya na aka ga-abụ nnukwu ọrụ, ọbụlagodi maka otu mkpụrụ okwu ọbụla maọbụ ogologo okwu nke ndị na-ere ahịa na Amazon kachasị. Ntre, nso ke ẹkeme ndinam ye emi? N'ịtụle akpaaka, enwere m ike ịkwado iji otu n'ime ihe nchọpụta ndị na-esonụ dị na nchịkọta nhọrọ ndị ị ga - eme iji nweta ihe ịga nke ọma na - ere ahịa:
KTD Amazon Tool Tool - bụ ngwá ọrụ n'efu nwere ike inyere gị aka ọbụnakwa na ịchọta isiokwu ọchụchọ. Ọ na-arụ ọrụ naanị site na ịnye gị na-akpaghị aka crawled gbara ajụjụ hụrụ na Amazon search igbe maka niile niche na ngwaahịa yiri Keywords ị na-achọ.
Merchant Keywords - bụ ihe ọzọ ọzọ ego ọzọ iji nyere gị aka na isiokwu nnyocha na Amazon. Ihe bụ na ngwá ọrụ a na-ewepụ data niile ọnụ ọ bụghị naanị site na Amazon n'onwe ya, kama ọ na-eji usoro nke na-adọpụkwa data site na isi engines engines (dịka Google onwe ya, yana Yahoo na Bing). Ụzọ ahụ, Merchant Keywords na-eji algorithm ikpokọta ajụjụ ọchụchọ na Amazon ma nye gị atụmatụ atụmatụ okporo ụzọ.
Ekwere m na ndị niile jisiri ike nweta igbe Buy na Amazon ma ọ dịkarịa ala ugboro ole na ole amaliteworị ịbanye n'ime nsogbu a. Ekwuru m na onye ọ bụla na-enwusi ike nwere ike iji otu ụzọ ahụ mee ihe iji mepụta ndepụta gị ma hụ ya n'etiti ndị na-ere ahịa na Amazon na Amazon Buy Box - na ị na-eji obere ego na-eme ka ị buru ụzọ gaa n'ihu. Ma ebe a bụ mgbe ngwaahịa ngwaahịa na-akwụ ụgwọ na-abata. M n'onwe m na-akwado na-agbalị Repricer Express tupu ihe ọ bụla ọzọ. Ngwá ọrụ a nwere interface dị mfe, na-esonye n'etiti ndị na-akwụghachi ụgwọ na ndị buru ibu dị n'ahịa maka oge ahụ. Kedu otu o si arụ ọrụ? Tinye ya, ngwá ọrụ a bụ MUST-nwere ma ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ndepụta ngwaahịa ma ọ bụ ọtụtụ ngwaahịa maka ire ere na Amazon. N'ezie, ọ dịghị ụzọ ọzọ ị ga-esi nọrọ na mpi nke ịgba egwu n'ezie na Amazon n'emeghị ngwanrọ ngwugwu nke ọma. Kedu ihe ọzọ - ihe ngwọta a na-abụrịrị otu n'ime atụmatụ kachasị mma, ọ bụ n'ihi na ọ nwere ọnụego ọnwa ọhụụ, n'enweghị mkpesa iwe ọ bụla dabere na ọrụ.